Obere okwute na - enweghị ike iguzobe ahịa ahịa nke ụwa ma zụta ya Fitbit | Akụkọ akụrụngwa
Afọ ole na ole gara aga, mgbe ọ dịghị onye chere banyere ohere ịnụ ụtọ elekere nke ga-agwa anyị n'oge niile nke ọkwa anyị natara, ụmụ okorobịa si na Pebble bịara Kickstarter ma gosipụta ngwaọrụ nke mere ka ọ dịrị na ọnụahịa dị oke ọnụ. Pebble ghọrọ ihe edere n'ahịa smartwatch, mana ọ nwebeghị ike imeghari n'oge a, ebe ụdị ndị dị ugbu a na-enye anyị ihuenyo zuru oke, ma na-arụ otu ọrụ dị ka ndị bu ha ụzọ, na-enwekwa otu ọnụahịa dị ka Pebble , nke n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya emeela ka ọnụahịa nke ụdị ndị kachasị ọhụrụ ewepụtara na ahịa.
N'ịbụ ndị ụlọ ọrụ agbakọtara na ahịa, ọ tụrụ ọtụtụ ndị n'anya na Kickstarter na-aga n'ihu na-enye ya ohere ịmepụta mkpọsa iji chọọ ego maka ụdị ọhụrụ ya, dị ka anyị hụworo na njedebe ikpeazụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-ebupụta na n'agbanyeghị na enwere ihe ịga nke ọma, ekwela ka ụlọ ọrụ ahụ gaa n'ihu na-arụ ọrụ n'adabereghị n'ahịa. Fitbit ejiriwo adịghị ike Pebble zụta ya ma jiri ohere nke sistemụ arụmọrụ ya, sistemụ arụmọrụ nke ga - enyere aka melite interface na njikọ nke ụdị Fitbit.
Dị ka a kọrọ site na Financial Times, na-azụ na-fọrọ enen. Mana Fitbit agaghị naanị uru sistemụ arụmọrụ, ọ ga-erite uru site na patent patent edebanye aha Pebble. Ọ bụrụ na Fibit nwere mmasị naanị na sistemụ arụmọrụ, ọ ga-abụrịrị ihe dị ọnụ ala karịa iji mepụta ya site na ncha karịa ịzụta Pebble maka ọnụ ọgụgụ nke na-agaghị agafe 40 nde dollar.
Dị ka post a si kwuo, A ga-akwụsị ịmịcha obere oyu. Ihe anyị maara bụ ma ọ bụrụ na ụdị ọhụrụ ndị egosiri na ọnwa ole na ole gara aga ga-aga n'ihu na-ezigara ndị ahịa ma ọ bụ ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-akagbu ngwaahịa ahụ ma kwụsị iziga ha na ndị niile na-agbanye n'ụdị Pebble ọhụrụ ahụ, ụfọdụ ụdị ka dị arịlịka n'oge gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Pebble enweghị ike iguzogide ahịa nke ahịa ma Fitbit zụtara ya
Eziokwu bụ na amaghị m ya ma amaghị m Pebble, mana n'echiche m ihe kachasị mma ha nwere ike ime bụ ibibi ihe niile, sistemụ arụmọrụ, patent, wdg wdg na Fitbit na -emepụta ha site na isi ya na ndị 40 nde ahụ, edozila.
Enwere m olile anya na ha anaghị enye ha naanị obere ma ọ bụ obere ịkwụ ụgwọ ha ji ma ọ bụrụ na ha nwere ha, na ha nwere ike iji ego ahụ mee ihe ọhụụ wee gaa fuck Fitbit, ihe ọbụla bụ na amaghị m ma. .. ma ọ dị ka akụkọ ihe mere eme mgbe niile….
Nokia D1C ga - akụ ahịa ahụ nwere nhazi abụọ dị iche iche